Legal Documents - FXPRIMUS
Cida aanu nahay
Dhukumintiyadayada Sharciga Ah
Dhukumintiyadayada sharciga ahi waxay u adeegaan sidii loo ilaalin lahaa khibradaada ganacsi
FXPRIMUS waxay bixisaa jawi ganacsi oo aamin iyo anshax leh dhammaan macaamiisheeda iyo shuraakadeeda. Ogow wax badan oo ku saabsan dukumiintiyada sharciga ah ee xukuma xiriirkeena, lasoo dag dukuminti kasta ood xiisaynayso , si fudud.
Heshiiska Macaamiilku wuxuu qeexayaa xeerarka xukuma xiriirka ka dhexeeya FXPRIMUS iyo Macmiilka.
Ilaalinta arimaha gaarka ah, xifdinta xogaha maaliyadeed iyo shaqsiyadeed ee macaamiisha FXPRIMUS iyo dadka soo booqda shabaka waa mid kamida arimaha aan mudnaanta ugu weynsiino. Qoraalka Arimaha khaaska ah ee soo socda ayaa sharaxaya sida aan u ururinno una xifdino xogtaada.
This document addresses the risks associated with trading the financial markets.
Shuruucda iyo Heshiisyada Affiliate-ka
Shuruucda iyo Heshiisyada Affiliate-ka waxay qayaxayaan qawaaniinta loogu tala galay inay u dhaxeeyaan FXPRIMUS iyo qofka leh akoonka Affiliate-ka